Sidee iyo goorta la arko Nalalka Waqooyiga Norway | Saadaasha Shabakadda
Sidee iyo goorta la arko Nalalka Waqooyiga Norway
Ku dhowaad qof walbaa wuu maqlay ama ku arkay aurora borealis sawirrada. Qaar kale ayaa nasiib u yeeshay inay ku arkaan iyaga qof ahaan. Laakiin qaar badan oo ka mid ahi ma yaqaanaan sida loo aasaasay iyo sababta. Mid ka mid ah meelaha ugu habboon adduunka ee lagu arko aurora borealis waa Norway. Sababtaas awgeed, waxay noqotay meel dalxiis oo tayo sare leh si loo dhawro dhacdadan quruxda badan ee dabiiciga ah.
Aurora borealis ayaa bilaabmaysa oo leh iftiin dhalaalaya oo ku yaal dusha sare. Markaa wuu yaraanayaa oo qaanso iftiimaya ayaa soo baxda, mararka qaarkoodna waxay ku xirmaysaa goob aad u dhalaalaya. Laakiin sidee loo sameystaa maxayse howlaheeda la xiriirtaa? Ma rabtaa inaad wax ka ogaato wax kasta oo ku saabsan Nalalka Waqooyiga Norway?
1 Abuuritaanka Nalalka Woqooyi
3 Saamaynta aurora borealis
4 Nalalka Woqooyi ee Norway
5 Goormaad arki kartaa
Abuuritaanka Nalalka Woqooyi
Samaynta nalalka woqooyi waxay la xiriirtaa dhaqdhaqaaqa qorraxda, halabuurka iyo astaamaha jawiga dhulka.
Nalalka woqooyi waxaa lagu arki karaa aag wareeg ah oo ka sarreeya tiirarka Dunida. Waxay ka yimaadaan Qorraxda. Waxaa jira duqeyn ah walxaha subatomic ee Qorraxda ee lagu sameeyay duufaannada qorraxda. Qaybahaasi waxay u dhexeeyaan guduud ilaa casaan. Dabaysha cadceedda ayaa wax ka bedeshaa walxaha oo markii ay la kulmaan aagga magnetka ee Dhulka ayay leexdaan oo qayb ka mid ah ayaa lagu arkaa ulo.
Elektaroonada sameeya shucaaca qoraxda waxay soo saaraan soo saaris muuqaal ah markay gaaraan moleejooyinka gaaska laga helo magnetosphere (qayb ka mid ah jawiga dhulka ee ilaaliya Dunida ka yimaada dabaysha cadceedda, waxayna sababtaa kacsanaan heer atomik ah oo keenta iftiin. Iftiinkaasi wuxuu ku faafaa samada oo dhan, taasoo keenta muuqaal dabiici ah.
Waxaa jira daraasado lagu baaro nalalka waqooyi marka ay dhacdo dabaysha qoraxda. Tani waxay dhacdaa maxaa yeelay, in kasta oo la ogsoon yahay inay duufaannada qorraxda wataan qiyaas ahaan muddo 11 sano ah, Suuragal maaha in la saadaaliyo goorta aurora borealis ay dhici doonto. Dhammaan dadka doonaya inay arkaan Nalalka Waqooyiga, tani waa bahal. Ku safridda ulaha ma ahan mid raqiis ah oo aan la arki karin aurora waa mid niyad jab leh.
Haddii ifafaalaha dabiiciga ahi ka dhaco gobollada u dhow cirifka woqooyi, waxaa loo yaqaan 'aurora borealis'. Dhinaca kale, haddii ay ka dhacdo aagagga ku dhow cirifka koonfureed, waxaa loo yaqaan koonfurta aurora. Caadiyan, waxay dhacaan bilaha Sebtember iyo Oktoobar iyo Maarso iyo Abriil. Waqtiyadaan waxaa jira firfircooni ballaaran oo ah dhibcaha qorraxda.
Meelaha ugu wanaagsan ee lagu arki karo ayaa ku jira Norway, Sweden, Finland, Alaska, Canada, Scotland iyo Russia. Waxaa lagu soo bandhigi karaa siyaabo qaarkood sida dhibcaha iftiinka, xariijimo jihada jiifka ah ama qaabab wareegsan leh. Waxay sidoo kale noqon karaan midabbo kala duwan oo u dhexeeya casaan illaa huruud, buluug iyo cagaar.
Saamaynta aurora borealis
Dhacdadan, oo ay soo saaraan isbeddello lama filaan ah oo ku dhaca qaybta magnet-ka ee Sun, waxay hoos u dhigeysaa qadar fara badan oo tamar ah oo soo gala meeraheenna. Dhinac, waxay na siisaa dhacdooyinkan quruxda badan ee sixirka iyo cajiibka ah, laakiin dhinaca kale, si taban ayey noo saameysaa.
Dabaylaha qorraxda ee gala meeraheenna waxay soo saaraan faragelin xagga warbaahinta ah (saameyn calaamadaha telefishanka, telefoonka, dayax gacmeedyada, shucaacyada iyo nidaamyo elektaroonig ah oo kala duwan). Tani waxay keentaa in xiriirku kala go’o, laakiin marna khatar kuma aha aadanaha.
Nalalka Woqooyi ee Norway
Sidaan horeyba u soo sheegnay, Noorway waxay ka mid tahay meelaha adduunka ugu habboon ee lagu arko riwaayad aurora ah. Waa aag aad ku arki karto dhacdadan dabiiciga ah ee qarsoodiga ah iyo sixirka leh ee fudfudud.
Waxaa jira halyeeyo badan oo ka dhashay dhacdadan dabiiciga ah, sida halyeeyga Viking ee la xiriira Nalalka Waqooyiga milicsiga gaashaammada dagaalyahannadii Valkyrie.
In kasta oo laga ogaan karo meelo kala duwan oo dalka ka mid ah, meelaha ugu fiican ayaa laga heli karaa dusha sare ee Arctic Circle ee Waqooyiga Norway. Gaar ahaan waxaad ku arki kartaa suunka auroras adoo jasiiradaha Lofoten waxayna ku sii socotaa xeebta ilaa Waqooyiga Cape.
Meelahan ayaa ku habboon in lagu arko Nalalka Waqooyiga sida ugu fiican. Si kastaba ha noqotee, haddii aan rabno inaan sii joogno dhulka, waxaan haysannaa fursad wanaagsan oo ah in cimiladu qallalan tahay oo aan si sax ah loo arki karin. Si kastaba ha noqotee, xeebta ayaa leh faa'iidooyinkeeda. Waana in dabeyluhu ay yihiin kuwa soo noqnoqda oo awood u leh inay cirka uga baxaan iyagoo nadiif ah oo leh aragti weyn.
Goormaad arki kartaa
In kasta oo Norwey ay tahay aagga sida ugu wanaagsan looga arki karo Nalalka Woqooyi, haddana macnaheedu maahan inaan ogaan karno taariikhda, goobta iyo waqtiga saxda ah ee uu dhacayo. Fursadaha ayaa ugu badan inta udhaxeysa xilliga dayrta iyo guga equinoxes, taasi waa, inta udhaxeysa Sebtember 21 iyo 21 Maarso.
Sugitaan oo dhami waxay leedahay ajarkeeda. "Nalalka woqooyiga" waxay u muuqdaan kuwo aad u soo noqnoqda xilliyada dayrta iyo xilliga qaboobaha. Sidaa darteed, bilaha ugu wanaagsan ee la ilaaliyo waa Oktoobar, Febraayo iyo Maarso. Bilahaas, habeennadu waxay kala dheer yihiin oo maalmuhu si tartiib tartiib ah ayey u sii dheeraystaan.
Cunsurka go'aaminta marka la fiirsanayo dhacdadan cajiibka ah waa xaaladda cimilada hadda jirta. Kahor qorsheynta safarka aad ku tageyso Norway, waa muhiim inaad ogaato xaaladaha cimilada ee dhici doona maalmaha soo socda. Haddii roob la saadaaliyo, safar micno la’aan ah ayaad samaysay. Si looga fogaado xaaladda noocan ah, waxaa jira qaar ka mid ah barnaamijyada digniinta roobka kaasoo kaa digaya roobka ka da'aya aagga aad u safri doontid.
Haddii ugu dambeyntii aad maamusho inaad aragto Nalalka Waqooyiga, dhammaantood way u qalmi lahaayeen. Waa bandhig cajiib ah dhan walba. Dadka Waqooyiga Norway waxay leeyihiin Nalalka Waqooyiga oo qayb ka ah noloshooda. Hase yeeshe, waxay u adeegaan sida dhiirrigelinta farshaxanleyda, sheekooyinka, iyo halyeeyada. Saynisyahannadu waxay yiraahdaan dhammaadka Nalalka Woqooyi ayaa dhammaaday oo waxaan arki doonnaa marba marka ka sii dambeysa. Sidaa darteed, waxaa lagama maarmaan ah in laga faa'iideysto in la arko ifafaalooyinkan intaan soo noqnoqodkoodu yareyn oo yaraan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » Sidee iyo goorta la arko Nalalka Waqooyiga Norway
Waa maxay iyo sidee ayey u samaysmaan dabeylo iyo danab?
Maxay dhibcaha biyaha u sameysmayaan iyo qaabkee ayey yeelan karaan?